:: My Little World ::: December 2006
ဘယ်လိုလူမှ ကောင်းတာတွေကြီး အမြဲ မကြုံတွေနိုင်သလို ၊ ဆိုးတာတွေကြီးပဲလည်း အမြဲတမ်း ကြုံတွေနေ့ရမယ်လို့ကျွန်မ မထင်မိ ပါဘူး။ ဒီ ပြီးဆုံးတော့မယ့် ၂၀၀၆ မှာ .. ကျွန်မ ဘာတွေ တွေ့ ကြုံခဲ့ရသလဲ.. အကောင်းတွေရော၊ အဆိုးတွေပါ ကြုံတွေခဲ့ရ ပါတယ်.. ပြောင်းလဲမှု့ တွေ တော်တော်များများလည်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှု့ တွေဟာလည်း၊ ကောင်းသော ပြောင်းလဲမှု့ များလို့ကျွန်မ ယုံကြည်မိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဖြစ်လာသမျှ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီဟာက ကောင်းလို့ငါလက်ခံမယ်၊ ဒါကတော့ ဆိုးလို့ငါလက်မခံချင်ဘူးဆိုပြီး ရွေချယ်ခွင့် ကျွန်မတို့ မှာမှ မရှိကြတာ။ ဒီတော့ ဖြစ်သမျှကို လက်ခံ၊ နောင်ဖြစ်လာမယ် ကိစ္စတွေမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ သာ လို အပ်တာပါ။ ဒီတော့ ၂၀၀၆ မှာ ဖြစ်သမျှ အကောင်း၊ အဆိုး မှန်သမျှကို ရှောင်လွှဲမရ၊ ကျွန်မ လက်ခံရတယ်။ အဲ့ဒီ ကြုံတွေခဲ့သမျှ အဆိုးတွေစီက သင်ခန်းစာယူ၊ ကောင်းတာတွေ စီက အားအင်တွေယူပြီး နောက် လာမယ် ၂၀၀၇ မှာ အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်အောင် ဆက်ကြိုးစားရ ပါဦးမယ်။
၂၀၀၆ မှာ ထူးထူးခြားခြား မှတ်မိနေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကတော့..
သူငယ်ချင်း အသစ်တချို့ ရခဲ့တယ်..
ဒီနှစ်ထဲ ရန်ကုန်မပြန်ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ မိဘနှစ်ယောက်လုံးနဲ့တွေ့ ရပြီး ရက်အတော်ကြာကြာ တူတူနေခဲ့ရတယ်..
၂၀၀၆ ဖေဖေါ်ဝါရီမှ စတင်ခဲ့တဲ့ ဒီဘလောခ့်နဲ့နေးတစ်ဖိုရမ်ကနေ တဆင့် သူငယ်ချင်း အသစ်တွေရရှိခဲ့တယ်..
၂၀၀၆ မှာ ထူးထူးခြားခြား မှတ်မိနေမယ့် နေ့ တွေကတော့..
ကျွန်မ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံတိုင်း ကျွန်မကို အားပေးခဲ့ ၊ ကျွန်မရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု့ တွေကို အတူမျှဝေ ခံစားပေးခဲ့ ယုံမက ကျွန်မကို အချိန်တိုင်းမှာ နားလည်မှု့အပြည့်ပေးခဲ့တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ နဲ့ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေ၊ မောင်နှမတွေ၊ ကျွန်မ ရဲ့ အနီးမှာ ရှိနေတဲ့ (စု၊ကြယ်၊စိုးမိုး) နဲ့တခြား အဝေးက သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။
အားလုံး ကိုယ်၊စိတ် နှစ်ပါး ကျန်းမာ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ 
Posted by Nay Nay Naing at 12/31/2006 10:58:00 PM0comments
Happy Holiday ( 30-Dec-2006 to 02-Jan-2007)
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော အားလပ်ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
Holiday Mood ၀င်နေတာနဲ့ဘလောခ့်မရေးဖြစ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အားလပ်ရက် တွေရဲ့ အစ သောကြာနေ့(29-December-2006) ညမှာတော့ သူငယ်ချင်း တချို့ နဲ့ Suntec City က Marché မှာ Dinner သွားစားဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ Orchard သွား Coffee ဆိုင်ထိုင် စကားပြောကြတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ တွေ့ စုံပွဲ လေးပါ။ Dinner ကျွေးတဲ့ သူငယ်ချင်း နဲ့Coffee တိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မနေ့ ညကတော့ ကျွန်မက ဘာမှ ပြန်မကျွေးပဲ သူတွေ ကျွေးတာပဲ စားခဲ့လိုက်တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ၁၁:၃၀ ရှိပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း စားချင်တာတွေ စားလိုက်တော့ အိမ်အပြန် လမ်းကစပြီး ချောင်းပြန်ဆိုး လာတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး အိပ်ရာ ၀င်လိုက်ရတယ်။ ဒီနေ့ မနက် နိုးလာတော့ နေလို့ကောင်းသွားပါပြီ်။ တော်သေးတယ် ဒီရက်ပိုင်း မိုးသိပ်မရွာတော့လို့ ။ အဟုတ်ရင် နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေဘူး။
မနေ့ (30-December-2006) ကတော့ အိမ်ပြောင်းသူတစ်ယောက်ကို ပါးစပ်နဲ့လိုက်ကူလိုက်တယ်။ သူတော့ မသိဘူး ကျွန်မတော့ တော်တော်မောသွားတယ်။ သြော်...သူ့ ခမျာလည်း သူများတွေ အားလပ်ရက်နားနေချိန်မှာ မနားနိုင်ပဲ၊ ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး အိမ်အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်နေရတယ်။ နောက် အိမ်သစ်ရောက်ရင်လည်း ပြန်လည် နေရာ ချထားရေးက လုပ်ရဦးမယ်။ ကိုယ်တိုင်ကူချင်ပေမယ့် အဝေးကြီးမို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ အိမ်ပြောင်းတယ်ဆိုတာ တော်တော် ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်။ သူ တင်မက၊ တခြား ဒီက အိမ်အသစ်ကို ပြောင်းမယ့် သူငယ်ချင်းတွေလည်း အိမ် အသစ်တွေမှာ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူများတွေ အတွက်တော့ မသိဘူး၊ ကျွန်မ အတွက်ကတော့ ညနေ အလုပ်ပြီးလို့ပင်ပင်းပန်းပန်း ပြန်လာပြီဆို၊ ကိုယ်ရဲ့ နေရာလေးမှာ ကြိုဆိုမယ့်သူတွေ မရှိတဲ့ကြားက ပျော်စရာတွေမရှိတောင်၊စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့့ ပြည့်မနေဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
ခုတော့ တွေးနေမိတာက ဒီ Holiday မှာ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ထွေထွေထူးထူးတော့ လုပ်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။ အိမ်မှာပဲ အတိုးချ အနားယူဖို့စိတ်ကူးမိတယ်။ အိမ်ရှင်းစရာလေးတွေ ရှိတာ ရှင်းရင်း၊ Web Site တွေက ရုပ်ရှင်တွေလိုက်ကြည့်မယ်။ ၂၀၀၆ ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး ၄ ရက်ဆက်တိုက်ရတဲ့ နောက်ဆုံး အားလပ်ရက်တွေကို အနားယူရင်း၊ Home Sweet Home လုပ်ရင်း နဲ့ ပဲ ကုန်းဆုံးပါတော့မယ်။ ...
Posted by Nay Nay Naing at 12/31/2006 03:35:00 PM0comments
စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ အစ်ကိုတွေ၊ ဦးလေးတွေက ခင်မောင်တိုးတို့စိုင်းထီးဆိုင် တို့ ကို ဆို အရမ်းကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ သူတို့ သီချင်းတွေကို ကျွန်မ ငယ်ငယ်ထဲက ရင်းနှီးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကို ပြန်နားထောင်ချင်စိတ်ပေါက်နေတာတော့ ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့ တော့ မတွေ့ တွေအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီး ရှာလိုက်တာ 1 နာရီလောက် အချိန်ကုန်သွားတယ်။ ကျွန်မမှာ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းတွေ တော်တော်များများရှိပေမယ့် မူရင်း အဲ့ဒီသီချင်း ပါတဲ့ album မရှိဘူးဖြစ်နေတော့၊ ရှိသမျှ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သီချင်း အကုန်လုံးကို လိုက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ "အကောင်းတက အကောင်းဆုံးတေးများ" (၃) ထဲမှာ ဒီသီချင်းပြန်ပါနေတာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး မတတ်န်ိုင်ဘူး - စိုင်းထီးဆိုင်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက်ချည်းပဲ လိုချင်လို့ တော့ မရဘူးရယ်
ဒွန်တွဲတဲ့ ဆိုးကွက်လဲပါမယ် အံဝင်ဂွင်ကျ ဆုတောင်းသမျှ
ပြည့်စုံအောင် ဘယ်ဘုရားမှ မစွမ်းနိုင်ဘူး
နီးစပ်တာနဲ့ရောင့်ရဲကြရတာပဲ .. မင်းအသိပါပဲ
ကျောက်တိုင်းအပြစ်လေးတော့ရှိတယ်.. လူတိုင်းချို့ ယွင်းချက်ရှိမယ်
သဘာဝရဲ့ သဘောတရား တခုပါပဲ
ထိပ်ဆုံးထိမရောက်ခဲ့ရတောင် အလယ်အလတ်တော့ မကပါတယ်
ဒီလောက်နဲ့ မှ မကျေနပ်ရင် အရှုံးပေးဖို့ / လက်လျှော့ဖို့ ပဲ ကျန်တော့တယ်
ဒီထက်ပိုပြီး မင်းအလိုကို မဖြည့်နိုင်ဘူး
ဒီထက်ပိုပြီး မဖြစ်နိုင်ဘူး မတတ်နိုင်ဘူး ....
ရေနက်လည်း ကြမ်းရှိရမယ် အပင်မြင့်လည်း အဖျားရှိရမယ်
ဒါပေမယ့်လည်း တိုင်းလို့ မရစကောင်းနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတော့ရှိပါတယ်
မင်းမတောင်းရပဲ ကိုယ်ပေးအပ်ခဲ့တာ မင်းအသိပါပဲ...
Posted by Nay Nay Naing at 12/29/2006 04:30:00 PM2comments
Top 99 Women 2006 - AskMen
ဒီနေ့ တော့ တွေ့ မိတာက AskMen.com ကနေ့စာရင်းပြုစုထားတဲ့ TOP 99 Women 2006 ဆိုတာကိုပါ။ အဲ့ဒီ မှာ What she is known for? , 2005 Careers Hightligh နဲ့2006 Career Forecast ဆိုပြီး တစ်ယောက်ချင်း အကြောင်းလေးတွေကို ရှင်းပြထားတော့ ပုံလေးတွေလည်း ကြည့်ရ၊ ဒါ ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလို့ ကျော်ကြားတာလဲ သိရဆိုတော့ ကျွန်မတော့ တော်တော်လေး သဘောကျမိတယ်။ ပြီးတော့ အရင်နှစ်က ရတဲ့ Rank ကိုလည်း Last Year's Rank ဆိုပြီး ပြထားပြန်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ AskMen.com Desirability Score ဆိုပြီးလည်း ပြထားသေးတယ်။ ဘယ်လို အဲ့ဒီ Score ကို တွက်ချက်ရရှိတယ်ဆိုတာကို .. ရှင်းပြထားပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး 1 to 10 မှာရှိနေသူများစာရင်းပါ။
1. Jassica Alba
နောက်ဆုံးက No. 99 ချိတ်တဲ့ သူကတော့ Anna Kournikova ပါ။
ကျွန်မ သတိထားမိတဲ့ တခြားသူတွေကတော့
Jennifer Lopez (JLo) က နံပါတ် (81) ၊
LindsayLohan က နံပါတ် (18) ၊
Jennifer Aniston က နံပါတ် (27) ၊
Nicole Kidman က နံပါတ် (96) ၊
Lucy Liu က နံပါတ်( 93) ၊
Zhang Ziyi က နံပါတ် (79)
Cameron Diaz က နံပါတ် (91)၊
AskMen.com ဆိုတာ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ နေရာတဲ့.. အမယ်လေး.. တစ်လ တစ်လ လာဖတ်သူ အရေအတွက်က5Millions တောင်ရှိတယ် ပြောထားတယ်။ တော်တော် လူကြည့်များတဲ့ WebSite ပါပဲ။ ကျွန်မတော့ ဒီနေ့ TOP 99 Women 2006 List ကိုပဲ ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။ ကြည့်မိသလောက်တော့ ပုံလေးတွေက မရိုင်းပဲ လှလို့ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ သွားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ လူဆိုတာ အလှကြိုက်တဲ့ သူတွေကြီးပဲမို့ဒီလို ချောချော လှလှလေး ချစ်စရာ ပုံလေးတွေ ကြည့်ရရင် အနည်းဆုံးတော့ စိတ်ချမ်းသာမှု့ ရမှာ အသေအချာပဲ မဟုတ်လား။
Posted by Nay Nay Naing at 12/28/2006 04:23:00 PM0comments
မနက်က အလုပ်မှာ ဘယ်ဆိုဒ်မှာ ၀င်လို့ မရ ဖြစ်သွားတယ်။ ပထမတော့ ကျွန်မ တို့အလုပ်က Server တစ်ခုခု ဖြစ်လို့လို့ ပဲ ထင်လိုက်တာ။ နေ့ လယ် ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ ဖုန်းပြောဖြစ်မှ ပဲ တခြား သူငယ်ချင်းတွေလည်း အလုပ်မှာရော၊ အိမ်တွေမှာပါ အင်တာနက် ရတော့ ရတယ်၊ Connection ကတော့ အရမ်းနှေးနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ထမင်းစားပြန်လာတော့ အလုပ်မှာ အင်တာနက်တော့ ပြန်ရနေပြီ၊ ဒါပေမယ့် Website တွေ ၀င်ရတာ အရမ်းနှေးနေပြန်တယ်။ ခဏခဏ လည်း disconnect ဖြစ်နေပါတယ်။ ပုံမှန် WebSite တွေကို သွားတာရတာ နည်းနည်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပေမယ့်၊ ဘယ် File မှ Upload လုပ်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်မတို့အလုပ်မှာ Messenger မသုံးရဘူးဆိုတော့ အရင်ကဆို Web Messenger တွေသုံးပြီး ခဏ လောက်တော့ ၀င်ကြည့်နိုင်ပေမယ့် ဒီနေ့ တော့ လုံးဝ ၀င်မရပါဘူး။
ဘာကြောင့် ဒီလိူဖြစ်နေရတာလည်းလို့သတင်းတွေလိုက်ရှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ ထိုင်ဝမ်မှာ မနေ့ က လုပ်သွားတဲ့ ငလျှင်ကြောင့် ဒီမှာ Internet Connection တွေ အရမ်းနှေးနေတာလို့သိလိုက်ရတယ်။ ဒီမှာ လူသုံးအများဆုံး Service Provider ဖြစ်တဲ့ StarHub ကတော့ ဒီလိုလေး ပြောထားတယ်..
အလုပ်မှာတောင် ဒီလောက် နှေးနေရင် အိမ်က အင်တာနက် တော့ ဘယ်လို ဖြစ်နေမလဲ မသိဘူး။ ... အိမ်ပြန်ချိန်ကျော်နေပေမယ့် သိပ်မပြန်ချင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်မှာ လုပ်စရာဆိုလို့အင်တာနက်သုံးတာပဲ ရှိတဲ့ဟာကို ဒီလောက်နှေးတဲ့ Connection နဲ့ ဆို သိပ်စိတ်ရှည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အင်း .. ဒီညတော့ DVD လေးကြည့်ပြီး စောစော အိပ်ရတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/27/2006 06:14:00 PM4comments
Collection of Old Pictures
အလုပ်လုပ်ရင်း စိတ်ပြေလက်ပျောက်၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလေးလုပ်လိုပ်ဦးမယ်ဆိုပြီး ဟိုရှာဒီရှာလုပ်လိုက်တာ၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ Website တစ်ခုရှာ ရှာတွေ့ လိုက်တယ်။ ဟိုရှေးရှေးတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ Photo အဟောင်းတွေ ကို စုစည်းပေးထားတဲ့ Website တစ်ခုပါ။ ပုံတွေက အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မတော့ အလုပ်မှာ မအားတဲ့ကြားကနေပြီး Burma, Civil War, Castles ,Flights, England ဆိုတာတွေကို လိုက်ရှာ ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ (Burma) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုံကတော့ ၃ ပုံပဲ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီ site မှာ .. အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲပြီး စုစည်း ပေးထားတာတွေ့ ရတယ်။
Site Search မှာလည်း ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာတွေကို လိုက်ရှာကြည့်နိုင် သေးတယ်။
ဓာတ်ပုံ တွေ၊ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အဖို့တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားကြည့်သင့် ပါတယ်။
ဒီမှာက အဲ့ဒီ ဆိုဒ်မှာရှိနေတဲ့ Burma နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပုံတွေ အကြောင်းပါ။
The photo documents Burmah: elephant working.
It was taken in 1910 by Carpenter, Frank G. (Frank George), 1855-1924.
The image shows two uniformed and armed prison guards in Rangoon, Burma.
It was made in 1910 by Carpenter, Frank G. (Frank George), 1855-1924.
The illustration documents five male prisoners squatting with hands pressed together amidstafibrous material in Rangoon, Burma.
Posted by Nay Nay Naing at 12/27/2006 05:14:00 PM0comments
What If I Die Tonight ??
by Manu Kanwarpal
What if I die tonight..
Will it beajoy, sorrow or delight..
And does it really matter, whether I am or I am not..
Coz all this world, just seems to beaplot !
Would the earth stop moving and the Sun stop shining ..
Would the stars stop twinkling and the wind stop rhyming..
Would the men stop doing their daily chores..
Would the water stop splashing on sea shores..
If nothing in this world is gonna change at all..
Then why on earth are we afraid to fall .. ?
Then some would come to say good bye..
But I wont be there to see them sigh !
And some would remember in their silent tears..
In memories of those wonderful years..
For the world that night might be sad..
But deep inside I will be glad..
Coz I'm gonna meet the lord that night..
After all this wait, I'm gonna see that light !
Posted by Nay Nay Naing at 12/27/2006 09:53:00 AM0comments
သူ့ မှာတမ်း - မင်းသုဝဏ်
မင်းသုဝဏ် ရေးသားတဲ့ "သူ့ မှာတမ်း" ဆိုတဲ့ ကဗျာအပိုင်းအစလေးကို စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်လိုက်မိတာနဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးကို ဖတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာလို့လိုက်ရှာလိုက်တော့ မမွန်ရဲ့ ဘလောခ့်မှာတွေ့ လိုက်ရတယ်။ မမွန်ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်သွားတယ်။ မဟုတ်ရင် ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်ရှာနေရဦးမှာ။ မမွန်က ဒီကဗျာလေးကို ပလန်းနတ်က ကူးထားတာလို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒီကဗျာကို ကြိုက်နှစ်သက်တာနဲ့ကျွန်မလည်း မမွန်စီက ထပ်ကူးပြီး ဒီမှာ မှတ်ထားလိုက်တယ်။
သူတို့ အဆုတ်၊ ထားခဲ့မြှုပ်သည့်
ရွာသား ရွာသူ မေးကြမြူသည်
အူအူယမ်းငွေ့ထတုန်းတည်း။
ကိုယ်လွတ်ရှောင်ခွာ ခွဲရပါရွေ့ 
ယမ်းငွေအူအူ တလူလူနဲ့မေးမြူကြတုန်း
အနောက်ကုန်းဝယ် နေလုံးကွယ်လေပြီတကား။ ။
Source : ThuHninSee
Posted by Nay Nay Naing at 12/26/2006 05:38:00 PM0comments
သောကြာညနေ ( 22nd Dec 2006)
ပုံမှန်အရဆို သောကြာ ညနေတိုင်း အပြင်မှာ ညစာ စားဖြစ်ပေမယ့်၊ ဒီသောကြာညနေတော့ မိုးတွေကရွာပြီး၊ နေမကောင်းတာနဲ့အိမ်ကို တန်းပြန် ဖြစ်သွားတယ်။ နောက် ၃ ရက်ဆက်တိုက် အားလပ်ရက်ရတာဆိုတော့ အဲ့ဒီရက်တွေမှာ နေမကောင်း ဖြစ်နေမှာ စိုးရိမ်တာနဲ့ပြန်နားဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ တစ်နေ့ လုံး မိုးတွေရွာနေတော့ အလုပ်မှာ တချိန်လုံး ချောင်းတွေဆိုးပြီး လူက ပင်ပန်းနေတာကြောင့် အားလပ်ရက်မှာ ကြည့်ဖို့သောကြာညတော့ Movie တွေဒေါင်းလုတ် လုပ်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပေမယ့်၊ မလုပ်ဖြစ်ဘဲ စောစော အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။
စနေနေ့.. ( 23rd Dec 2006)
တစ်နေကုန် အလုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့တယ်။ ညနေပိုင်းတော့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်နဲ့ တွေဖို့orchard သွားဖြစ်လိုက်တယ်။ ချိန်းထားတာ ၆း၃၀ ဆိုပေမယ့်၊ တကယ်တွေ့ တော့ ၇ နာရီကျော်နေပြီ။ အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ မယ် ဆိုပြီး ချိန်နေတာ ၁ နှစ်လောက် ရှိနေခဲ့ပေမယ့်၊ အဲ့ဒီနေ့ မှ တကယ်တွေ့ ဖြစ်တော့တယ်။ orchard မှာ များလိုက်ကြတဲ့ လူတွေ၊ ကျိတ်ကျိတ်တိုးနေတာပဲ။ လူကြားထဲမှာ လူပိပြီး ပြားမသွားအောင် မနည်းကို တိုးသွားရတယ်။ ဒါလည်း မဆန်းပါဘူးလေ။ ဒီနိုင်ငံမှာက သွားစရာဆိုလို့အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုပဲရှိတာကို။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့dinner စားပြီး နောက် ရုပ်ရှင် ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ ၁ နှစ်ကျော်အတွင်း ဒါ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင် ကြည့်ဖြစ်တားပါပဲ။ ၂၀၀၅ နိုဝင်ဘာက နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကြည့်ခဲ့တာပဲ။ ညဖက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၁း၃၀ လောက်ရှိနေပြီ။ ထုံစံအတိုင်း Taxi နဲ့အိမ်ပြန်ရတာပေါ့။ Taxi ရဖို့တော်တော်လေး စောင့်လိုက်ရတယ်။ သုံးယောက်ဆိုပေမယ့် ပြန်မယ့် နေရာက တခြားစီဆိုတော့ Taxi သုံးစီးဖြစ်သွားတာပေါ့။ အိမ်ရောက်တော့ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲကို 1 to6အထိကြည့်လိုက်တာ မနက် မိုးလင်း ၅ နာရီမှပဲ အိပ်ဖြစ်တော့တယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ ( 24th Dec 2006)
မနက် ၁၁ နာရီထိုးမှပဲ နိုးတော့တယ်။ မနက်စာနဲ့နေလယ်စာ ပေါင်းစားလိုက်ပြီး ညက ကြည့်လက်စ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းကို ဆက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။6to9အထိပြီးသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့ ကောင်မလေး လာလည်လို့ဧည့်သည်ကိုမုန့်လိုက်ကျွေးရမယ် ဆိုတာနဲ့တခြား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပါ ချိန်းပြီး dinner သွားစားဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း orchard မှာပဲပေါ့။ အပြင်ထွက်ခါနီးမှာမှ ရွာလိုက်တဲ့မိုး၊ သည်းကြီးမဲကြီးကို ရွာနေတာပဲ။ နေလို့ မကောင်းပေမယ့် တွေ့ မယ်ပြောထားပြီး မှတော့ ကိုယ့်ဘက်က မပျက်ကွက်ချင်တာနဲ့အနွေးထည် ၀တ်ပြီး ထွက်ရတာပေါ့။ တော်ပါသေးတယ်၊ orchard ရောက်တဲ့ အချိန်ကြတော့ မိုးတိတ်သလောက်ရှိသွားပြီ။ X'mas eve ဆိုတော့ dinner စားဖို့ ဟာ ဆိုင်မှာ တော်တော်ကြာကြာတန်းစီပြီး စောင့်လိုက်ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့dinner စား၊ စကားပြောတာ တော်တော်လေးကြာတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ က orchard မှာ mid-night sale ရှိပေမယ့် လူတွေ အရမ်းများနေတာရယ်၊ နေလို့ မကောင်းတာနဲ့shopping မသွားဖြစ်တော့ပဲ ညစာစားပြီးတာနဲ့အိမ်တန်းပြန်လာဖြစ် လိုက်တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ၁၁:၃၀ ရှိနေပြီ။ မအိပ်ချင်တာနဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်း ဆက်ကြည့်လိုက်တာ အတွဲ 11 အထိ ပြီးသွားလို့အိပ်ရာ ၀င်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ မနက် ၅ နာရီထိုးရှိနေပြီ။
အဲ့ဒီနေ့ က လုပ်မယ်ကြံပြီး မလုပ်ဖြစ်လိုက်တာက Channel5က လာမယ့် Love Actually movie ကို ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးပါ။ အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၀၃ ရုံစတင်တော့ oxford မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သိပ်မမှတ်မိတော့တာနဲ့ပြန်ကြည့်ချင်နေခဲ့တာပါ။ ဟိုမှာ ကျန်နေသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတာလည်း ပါတာပေါ့လေ။
တနင်္ဂလာနေ့( 25th Dec 2006)
X'mas နေ့ မှာတော့ စောစောနိုးနေတယ်။ မနက် ၉ နာရီလောက်မှာ နိုးလာတယ်။ မိုးတွေကလည်းရွာ၊ ချောင်းပြန်ဆိုးပြီး နေလို့မကောင်းတာနဲ့ဘယ်မှ မသွားပဲ အိမ်မှာပဲ နေတော့မယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့မိုးရွာထဲ အပြင်ထပ်သွားရင်တော့ ဆရာဝန်ကို ထပ်သွားတွေ့ ရဖို့ က သေချာသလောက်ရှိသွားပြီ။ မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ဖတ်စရာရှိတဲ့ webpage လေးတွေ ခဏဖတ်ပြီး၊ ကိုရီးယားကား ဆက်ကြည့်လိုက်တာ အတွဲ 16 အထိ ပြီးသွားတယ်။ လူလည်း ခေါင်းတွေ မူးနောက်၊ ချောင်းက မတရားဆိုးလာတာနဲ့ ဆေးသောက် အိပ်လိုက်တာ ပြန်နိုးလာတဲ့ အချိန်မှာ ည ၇ နာရီ ထိုးနေပြီ။ ရေချိုးပြီး မြန်မာ ရုပ်ရှင်တွေကို အွန်လိုင်းက ကြည့်လိုက်တာ ၂ ခွေပြီးသွားတယ်။ နောက်တော့ မမေ နဲ့တခြား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က JaJah ကနေ့ရန်ကုန်ကို free ခေါ်လို့ ရနေတယ် ဆိုတာ အကြောင်းကြားတာနဲ့အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောဖြစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ချင်စိတ်မရှိတာနဲ့ရုပ်ရှင် ၂ ကား ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပြီး ကြည့်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ မိုးတွေ အရမ်းရွာနေတာ ဆူညံနေတာနဲ့တစ်ညလုံးကောင်းကောင်းမအိပ်လိုက်ရဘူး။ ခေါင်မိုးပေါ် မိုးစက် ကြသံ တဖျောက်ဖျောက်ကို ကြားနေရတော့ ရန်ကုန်က မိုးတွင်း မှာကြုံတွေ့ ရတာတွေ၊ ငယ်ငယ်တုန်းက မိုးရာသီဆို အတန်းကျောင်း စတက်ရတာတွေ၊ မိုးရာသီမှာ ညဘက်ဆို ကြားရတဲ့ အကောင် အော်သံတွေကို သတိရနေခဲ့ မိတယ်။
ဒီ ၃ ရက်ရတဲ့ အားလပ်ရက်မှာ ဘာတွေ သာမန်ထက် ထူးခြားလည်းဆိုတော့
ရောက်လေ့မရှိတဲ့ 0rchard မှာ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် Dinner သွားစားဖြစ်တယ်။ ( ပိုက်ဆံ ကုန်တာသွားတယ်)
မကြည့်စဖူး ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့တခြား Movie တွေ တော်တော်များများကို ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ ( မျက်စိညောင်းတယ် )
Technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Web Pages နည်းနည်းနဲ့Email Check တာရယ်က လွဲလို့တခြားဘယ် Web Site မှ မရောက်ဖြစ်၊ မဖတ်ဖြစ် လိုက်ဘူး။ ( ဘာသတင်းမှ မသိတော့ဘူး )
ဒီ Holidays မှာ ဖတ်စရာရှိတာတွေ ကို စဖတ်မယ် ၊ Information လိုက်ရှာစရာတွေကို အပြီး လိုက်ရှာမယ် စိတ်ကူးပေမယ့်.. လုံးဝကို မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ (ပုံမှန်ထက် ပိုအပျင်းထူနေတယ်)
လုပ်စရာ ရှိတာတွေ အားလုံးကို မေ့ထားခဲ့တယ်။ ( စိတ်ချမ်းသာတယ်)
Posted by Nay Nay Naing at 12/26/2006 02:29:00 PM0comments
ဇာဂနာ - မြန်မာပြည်ရဲ့ ချာလီချက်ပလင်
လူထုစိန်ဝင်းပြော သော ဇာဂနာ အကြောင်း....
ဇာဂနာကို စတင်တွေ့ဖူးတဲ့အချိန်က သူဟာ ရှက်တတ်ပြီး စကားနည်းတဲ့ တကိုယ်တော် လူငယ်လေးတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်တော့် စာသင်ခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ထပ်ပြီး တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာတော့ ရှက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ စကားနည်းတဲ့ ကောင်လေးတယောက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒီ အချိန်မှာ သူဟာ လူသိများတဲ့ အကျဉ်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်သလို အလွန် ကျော်ကြားတဲ့ လူရွှင်တော်တဦးလည်း ဖြစ်နေပါပြီ။
နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်က ပြန်လွတ်ပြီး ရက် အနည်းငယ် အကြာမှာ ဆရာဟောင်းကို သူ လာတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ သူဟာ စကားအိုး တယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ အားရပါးရရယ်မောပြီး ဘေးနားမှာရှိတဲ့ အတန်းဖော်ဟောင်း တွေနဲ့ ပြက်လုံးတွေ တခုပြီးတခု ထုတ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ရှက်တတ်ပြီး စကားနည်းတဲ့ ကောင်လေးကနေ အာဝဇ္ဇန်းရွှင်တဲ့ လူရွှင်တော်တယောက် ဘယ်လိုများဖြစ်သွားပါလိမ့်။ သူ့ပြက်လုံးတွေက ဘာကြောင့်များ သူ့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ကျအောင်လုပ်လိုက်တာလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် စဉ်းစားနေမိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူ ရယ်မောပြီး ပြက်လုံးထုတ်နေတာကို ကျွန်တော် ကြည့်နေမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ အမှန်တကယ် ရယ်မောနေ တာဟုတ်ရဲ့လား။ သူ့ရယ်မောသံမှာ နောက်သံစဉ်တခုကို ကျွန်တော် ကြားရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ သူဟာ နှလုံးခုန် လိုက်တိုင်း ငိုကြွေးနေတာပါ။ သေသေချာချာ ကြည့်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ရယ်မောနေတဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ မျက်ရည်စတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေက ငိုကြွေးနေတယ်။ နာကျင်မှု ဝေဒနာတွေနဲ့ ငိုကြွေး နေပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်အတွက်တော့ မဟုတ်ပါ။ သူ့တိုင်းပြည်အတွက် ငိုကြွေးနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြင်မြင်သမျှ အရာရာတိုင်းကို ပြက်လုံးထုတ်တတ်တဲ့ လူရွှင်တော်တယောက်ဖြစ်လာအောင် အဲဒီလို ငိုကြွေးခြင်းက ဖန်တီး လိုက်တာပါ။ သူဟာ သာမန်လူရွှင်တော် တယောက်သာ မကပါ။ သူဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ချာလီချက်ပလင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လူမှု ဝေဖန်ရေးသမား ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့အသံ ဖြစ်တယ်။
သူ့ပြက်လုံးတွေဟာ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ ပြောမထွက်တဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာ တိုင်းမှာ အမြဲ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ “အကိုကြီး” ကို ကြောက်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်မပြောရဲပေမယ့် ကြားချင်တဲ့စကားတွေ ပြည်သူများမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီလို ပြည်သူတွေကြားချင်တဲ့ စကားတွေကို ဇာဂနာက ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောပေးပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ဇာဂနာဟာ မျက်ရည်ပြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ရယ်မောနေပါတယ်။ သူ့ပြက်လုံးတွေဟာ ဓားသွားလို စူးရှတယ်။ ဟာသပါတဲ့ စကားတွေက မြားတစင်းလို လျင်မြန်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ဆရာဟောင်း ကျွန်တော်ကတော့ တမင်ဖန်တီးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ရယ်မောခြင်းထဲမှာ နာကျင်မှုဝေဒနာအပြည့်နဲ့ သံစဉ်တခုကို ကြားနေရပါတယ်။
ဒီစာပုဒ်ကို ဧရာဝတီ -၂၀၀၆ ခုနှစ်၏ ထူးခြားထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်များ မှာ ဖတ်လိုက်မိတာပါ။ အဲ့ဒီ စာရင်းမှာ ပါဝင်သူတွေနဲ့အဖွဲ့ အစည်း တော်တော်များများကို သဘောကျမိပေမယ့်၊ တချို့ သောသူတွေကိုတော့ ဘာလို့ ထည့်ထားတာလဲဆိုတာ ကျွန်မ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 12/26/2006 11:24:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/25/2006 09:29:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/22/2006 02:10:00 PM0comments
အလုံးအရင်းနှင့် လာနေသော မြန်မာ့ပို့ကုန်
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က ဧရာဝတီမှာ တင်လိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ အားလုံးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ တချို့ လည်း ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖူး ကြမှာပါ။ ကျွန်မ ကတော့ ဒီဆောင်းပါး ပိုစ့်လုပ်လုပ်ချင်း ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ AIDS ရောဂါ အကြောင်း တကယ့် အမှန်တရားတွေကို ရေးသားထားတာမို့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း အနည်းဆုံး တစ်ခေါက်လောက်တော့ ဖတ်သင့်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။ ဒီ ဆောင်းပါးကို PDF ပြောင်းပြီး သူငယ်ချင်း တချို့ စီကို ပို့ ဖို့ကြိုးစား လိုက်ပေမယ့် အလုပ်နည်းနည်း ရှုပ်သွားတာနဲ့မပို့ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
ဒီနေ့ တော့ ကျွန်မနဲ့အရင်းနှီးဆုံး လူတစ်ယောက်က ကျွန်မကို ဒီဆောင်းပါးလေး ကောင်းတယ် ဖတ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီး လင့်လေး လာပို့ ပါတယ်။ သူ့ လို မြန်မာသတင်းတွေကို အမြဲဖတ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်တောင် ဒီဆောင်းပါးကို ခုမှတွေ့ တယ်ဆိုတော့ .. တခြားလူတွေဆို ဒီလို သတင်းဆောင်းပါးကို ဖတ်မိချင်မှာ ဖတ်မိကြမှာ၊ တွေ့ ချင်မှ တွေ့ ကြမှာလို တွေးမိလိုက်တာနဲ့အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်မရဲ့ ဘလောခ့်ကို လာဖတ်လေ့ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်မိအောင် ဒီမှာ မျှဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
အေ့ဒ်စ်ရောဂါ သို့မဟုတ် အလုံးအရင်းနှင့်လာနေသောမြန်မာ့ပို့ကုန် - အင်ဒရူးမာရှယ်
ဧရာဝတီ : အလုံးအရင်းနှင့်လာနေသောမြန်မာ့ပို့ကုန် - အင်ဒရူးမာရှယ်
PDF - Myanmar Version
Irrawaddy : AIDS:Burma’s shadowy mass export - Andrew Marshall
မသိနားမလည်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ မသိကျိုးကျင်ပြုခြင်းတို့ကြောင့် ကုသ၍ရနိုင်သော ရောဂါ တခုသည် မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးကို အမျိုးတုံးစေပြီး အရှေ့အာရှကိုပါ အန္တရာယ်ပြု ခြိမ်းခြောက် နေပြီလော။
ကျွန်မရဲ့ ဘလောခ့်ကို ဖတ်လေ့မရှိတဲ့၊ မသိကြတဲ့ ကျွန်မရဲ့ တခြားသူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေ email က တဆင့် ပိုမယ့်ဆိုပြီး ဒီဆောင်းပါးကို PDF ဖိုင်ကိုလည်း ပြောင်းထား ပါတယ်။ Irrawaddy site ကို ကျော်ခွ ၀င်လို့ မရတဲ့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေလည်း PDF file ကို ဖတ်လို့ရတာပေါ့။ ဒီ ဆောင်းပါးလေး ဖတ်မိကြရင် တက်နိုင်သမျှ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ ဖတ်မိအောင်၊ ထပ်ဆင့် မျှဝေ ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီ ယူနီကုတ်နဲ့ေ၇းထားတာကို PDF file ပြောင်းလိုက်တာ စားလုံးတွေ အမှန်မပေါ်ပဲဖြစ်နေတာခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ကိုမောင်လှရဲ့ MgHla ဘလောခ့်က ZawGyi2Win Converter ကိုသုံးပြီး ဇော်ဂျီကို ၀င်းကလောဖွန့်အရင်ပြောင်း၊ ပြီးတော့ English စာလုံးတွေကို အမှန် အတိုင်း ပေါ်အောင်လုပ်ပြီး PDF ပြောင်းလိုက်မှ အဆင်ပြေ သွားတော့တယ်။ Zawgyi2Win Converter အတွက် ကိုမောင်လှကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Labels: Myanmar, News, Notes
Posted by Nay Nay Naing at 12/21/2006 03:15:00 PM4comments
IT Xmas Nite 2006
ဒီညနေက အလုပ်မှာ IT Department ရဲ့ Xmas Party ရှိလို့ သွားဖြစ်တယ်။ အရင်ကဆို အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေ သွားလေ့မရှိပေမယ့် ခုတော့ အသက်ကလည်းကြီးလာပြီ၊ လူမှု့ ရေး၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းကြီးရဲ့ စကားတွေကြောင့် သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီ သွားလိုက်တယ်။ တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိစ္စ မရှိပါဘူး၊ လုပ်ချင်ရင် အကုန်ဖြစ်တယ်လို့သဘောထားပြီး တွေ့ တဲ့လူတွေနဲ့ပြုံပြ၊ မိတ်ဆက်၊ အလာပ သလာပ ဟိုပြော ဒီပြော စကားတွေပြောလိုက်တာပေါ့။ အဆင်ပြေသွားတာပါပဲ။
ပွဲကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အုပ်စုတွေဖွဲ့ ပြီး ကစားကြတယ်၊ Xmas သီချင်းတွေ ဆိုကြတယ်။ ဆုတွေပေးတယ်၊ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်ပြီး Xmas လက်ဆောင် မဲဖောက်ပေးတာ၊ မဲတော့ပေါက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆုကြီး ၁၀ ဆု ထဲကတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဆုကြီးတွေထဲက ၀ိုင်ပုလင်းတွေ အများကြီးပါတဲ့ ဟာကိုမဲပေါက်လို့ ကတော့ ဟို သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ၁ ပုလင်းတော့ ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီး တွေးနေခဲ့ပေမယ့် ဆုမပေါက်တာနဲ့ပေးစရာမလိုဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
သူများတွေ သီချင်းဆိုနေတုန်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်နေလိုက်တာ.. ဟိုဘက်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့ Sentosa ရယ်၊ မီးထွန်းထားတဲ့ တိုက်ကြီးတွေရယ်ကို အမြင့်ကနေ ကြည့်ရလို့ လားတော့မသိဘူး၊ မြင်ရတဲ့ ရှု့ ခင်းက တော်တော်လေး လှတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ ကျော်ပြီး Sentosa ဘက်သွားနေတဲ့ Cable Car တွေတွေ့ ရတာလည်း မိုက်တယ်။ စားစရာ နေရာရှားလို့Cable Car ပေါ်တွေမှာ ဖရောင်းတိုင်မီးလေးထွန်းပြီး ညစာစားနေကြသူတွေကို လည်း အံ့သြမဆုံးဖြစ်မိတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ ငသလောက်ကျော်လို၊ ငပြေမဟင်းလို အရိုးများများဟင်း ကျွေးရင် ဘယ်လိုများနေမလဲမသိဘူး။ ရုပ်ရှင်ထဲကလိုမျိုးဆို Cable Car ပေါ်မှာ ဖရောင်းတိုင်မီးလေးနဲ့romantic ဆန်ဆန် dinner ကျွေးပြီး propose လုပ်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိချင်ရှိနေမှာလို့အတွေးကြောင် မိလိုက်သေးတယ်။ မရှိဘူး မပြောနိုင်ဘူး၊ ရှိချင်ရှိနေမှာပါ။ တစ်ချို့ လူတွေကလည်း ဒါမျိုးတွေကို သဘောကျတာ မဟုတ်လား။
ဘူဖေး(လ်) ကျွေးတာကို အ၀ စားခဲ့လိုက်တယ်။ အရင်ကဆို ပွဲတွေမှာ အစားအစာတွေ သွားယူ စားရမှာ၊ ရွံ့ တွံ့တွံ့ဖြစ်နေတာနဲ့ဘယ်တော့မှာ ၀အောင်မစားရဘူး။ ခုတော့ “သြော် ငါမစားရင်တော့၊ ငါငတ်ရုံသာ ရှိတော့မယ်ဟဲ့” ဆိုပြီး ၀အောင်စားလိုက်တယ်။ တစ်ကိုယ်တော် ကျဲတဲ့ ပွဲလို့ ဆိုရမယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီနိုင်ငံမှာ ကျတဲ့ snow ကို မြင်ဘူးလိုက်ရတယ်။ အစစ်တော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ထုံးစံအတိုင်း စက်နဲ့ဖန်တီးထားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အမိုးပေါ်ကနေ snow လေးတွေကျလာတာ ကို လက်နဲ့လိုက်ဖမ်းရင်း ဟို အရင်က ထိခဲ့ဘူးတဲ့ snow ပွင့်လေးတွေကို သတိရသွားတယ်။
ပြန်ဖို့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ကားနဲ့အိမ်ပြန်လာတာ အိမ်ရောက်တော့ ည ၁၁း၃၀ ရှိနေပြီ။ ဒါ ကျွန်မရဲ့ အလုပ်က လုပ်တဲ့ 2006 Xmas Party အတွေ့ အကြုံပါပဲ။ တစ်ခြားသူတွေလို Xmas Party မှာ ရင်ခုန်စရာလေးတွေ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။ ခုတော့ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ် ပြောရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ ကျွန်မဟာ ဒီလိုနေရာတွေမှာ တခြားသူတွေလို မတော်ပဲ အနည်းငယ် ညံ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ဝံခံ လိုက်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/21/2006 09:27:00 AM 1 comments
၂၇၄၆ ကြိမ်မြောက် ကရင် နှစ်သစ်ကူးနေ့(ပြာသိုလဆန်း ၁ ရက်နေ့ )
အိမ်ကို သတိရနေတယ်... ဒီအချိန်ဆို ဆူညံ ပျော်ရွှင်နေကြမှာပဲ။
နောက်ဆုံး ကြုံတွေ့ ရတဲ့ ကရင်နှစ်ကူးနေ့ နဲ့ခရစ်စမတ်နေ့ က တစ်ရက်ထဲကြပြီး ပျော်ဖို့ ကောင်းတာကို သတိရမိတယ်..
ကရင်နှစ်ကူးတိုင်း စားမေးပွဲရှိလို့သူများတွေလို မပျော်နိုင်ပဲ စာကြည့်နေခဲ့ရတာတွေကို သတိရတယ်.
အိမ်ရှေ့က ပွဲဈေးတန်းကြီးကို သတိရတယ်..
ပွဲခင်းထဲမှာ စားချင်တာတွေ လိုက်ဝယ်စားရတာကို သတိရတယ်..
အနီရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင် ကရင်ဝတ်စုံတွေ ၀တ်ထားတဲ့ ကရင်မ ချောချောလေးတွေကို သတိရတယ်…
တိုင်းရင်းသား သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ သုငယ်ချင်းတွေကို သတိရတယ်..
ဆူညံ မြူးကြွနေတဲ့ ကရင် ဒုံးရိမ်းအကကို သတိရတယ်..
ချမ်းအေးလှတဲ့ အချိန်မှာ ချွေးထွက်အောက် ကနေကြတဲ့ ကရင်ဒုံးယိမ်း ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို သတိရတယ်..
နားမလည်ပေမယ့် နားမထောင်ချင်လည်း ကြားနေရတဲ့ ကရင်လို စကားပြောသံတွေ၊ ကရင်လို သီချင်းဆိုသံတွေကို သတိရတယ်..
.. ကရင်နှစ်ကူးမှာ .. ကျွန်မ အတွက် သတိရစရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ..
ကရင်နှစ်ကူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေကြည့်ချင်လာလို့ လိုက်ရှာလိုက်တာ Kayin New Year Celebrations မှာ ပုံလေးတွေ ထတင်ထားတာ တွေ့ တယ်။ အဲ့ဒီက ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ရန်ကုန်က ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲကို ပိုသတိရသွားတယ်။
The national flag of Karen (Republic of Kawtholei)
The design withadrum is attributed to the KNU (Karen National Union)
Source : Karean Flags
Posted by Nay Nay Naing at 12/19/2006 04:57:00 PM0comments
Unwell = Ungrateful
Blogger is on MC for2Days
(18 Dec 2006 & 19 Dec 2006)
Posted by Nay Nay Naing at 12/19/2006 01:56:00 AM4comments
Interview Your Next Boss
အလုပ်အသစ်ရှာဖို့ ဆို ကျွန်မတို့Interview တွေသွားကြရတယ်...
ပြီးတော့ Interviewer တွေ မေးသမျှ မေးခွန်းတွေကို ကျွန်မတို့ကြိုးစားဖြေကြရတယ်..
အဲလို Interview တွေသွားရာမှာ Interviewer တွေကို ပြန်မေးခွန်းတွေ ပြန်ထုတ်ပြီး သူတို့ဖြေတာလေးတွေကို နားထောင်ချင်စိတ်လေးများ တစ်ခါမှ မဖြစ်မိကြဘူးလားရှင်...
သူများတွေတော့ မသိဘူး၊ ကျွန်မ အနေနဲ့ကတော့ Interviewer တွေက ချောင်ပိတ်မေးခွန်းတွေ အရမ်းမေးလာပြီဆို ဖြေနေရရင်းက သိပ်စိတ်မရှည်တော့ပဲ၊ အလုပ်ရတာ မရတာ အသာထားရော သူတို့တွေကို မေးခွန်းတွေ ပြန်ထုတ်ချင်စိတ်ပေါက်မိတယ်..
နောက်ပြီး ကျွန်မ အနေနဲ့ က လုပ်သက်ကလည်း သိပ်မရှိသေး၊ Interview သွားဖူးတဲ့ အကြိမ်အရေ အတွက်ကလည်း မများသေးတော့.. ( Interviewပါး မ၀သေးဘူး ဆိုရမလားပဲ) သူတို့ဘက်က မေးခွန်းတွေ မေးပြီးလို့ကျွန်မဘက်က ဘာများမေးချင်ပါသေးလဲ မေးလာရင် ဘာမေးရမှန်း မသိဖြစ်သွား တတ်သေးတယ်...
အဲလို ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျွန်မ အကြောင်းတွေကို သိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လ၊ ကျွန်မ အလုပ်အသစ်ရှာနေတဲ့ အချိန်တုန်းက ဒီ "Interview Your Next Boss" ဆိုတာလေးကို ရှာပြီး email နဲ့ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက တချို့ မေးခွန်းတွေကို ကျွန်မ လက်တွေ့အသုံးချဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Following areafew sample questions you might consider posing toahiring manager:
Why is this position open? Why did the last person leave?
Ifaproject is not on schedule, what does the company do to make the deadlines?
How does the review process work? How often does it occur?
How does the manager share credit/recognition for joint ideas?
How long has the manager worked there?
Is it possible to getapatent while you work there, or does all intellectual property belong to the company?
Can you tell me about your best employees and how you like to work with them?
Can you tell me about your least favorite employees?
အဲ့ဒီ article ထဲမှာပါတဲ့ "Always remember that the interview process isatwo-way street. And evenabad interview was well worth your time. " ဆိုတာလေးကို သဘောကျမိတယ်။
Thanks to STAung..
Posted by Nay Nay Naing at 12/17/2006 08:18:00 PM0comments
ငယ်ငယ်ထဲက နေရာတော်တော်များများမှာ အမြဲ မြင်တွေ့ နေခဲ့ပြီး မှတ်မိနေတဲ့ စာသားတွေပါ။ ဒီလို စာသားမျိုးတွေကို ခရစ်ယာန် အိမ်တွေရဲ့ အ၀င်ဝမှာ ဒါမှမဟုတ် ဧည့်ခန်းနံရံ တွေမှာ ချိတ်ထားလေ့ရှိကြတယ်။ ကျွန်မ နှစ်သက်မိလို့ကျွန်မ ရဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က နေရာ တော်တော်များများမှာ ဒါလေးကို ရေးထားလေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို အဲ့လို စာသားလေးတွေမှာ ရေးသူဘယ်သူ ဒါမှ မဟုတ် ဘယ်စာအုပ်၊ ဘယ်ကျမ်းစာက ဆိုတာပါပေမယ့် ဒီဆုတောင်းစကား မှာ ရေးသူနေရာမှာ ( Anonymous ) လို့ ပဲ တွေ့နေခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ webpage တွေကို လိုက်ကြည့်မိရင်း ဒါလေးပြန်ဖတ်မိတော့ ဘယ်သူ ရေးတာလည်း၊ ဘယ်ကလည်း သိချင်သွားတာနဲ့ လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တာ ဒီ Prayer အကြောင်းရေးထာတာကို AAHistory တွေ့မိတယ်။
ကျွန်မ အနေနဲ့သူတို့ခရစ်ယာန်တွေလို ဘုရားသခင်စီမှာ ဆုတောင်းတာ မဟုတ်ပေမယ့်..
၁. မပြောင်းလဲနိုင်သော အရာများကို လက်ခံရန် တည်ငြိမ်အေးဆေးသော စိတ်ဓာတ်ရယ်..
၂. ပြောင်းလဲနိုင်သော အရာများကို ပြောင်းလဲရန် ရဲရင့်သော သတ္တိ နဲ့ ...
၃. အဲဒီ အရာနှစ်မျိုးရဲ့ ခြားနားမှု့ ကို သိနိုင်သော ဥာဏ်ပညာ ..
ဒီသုံးခု ကျွန်မမှာ အမြဲ ရှိစေချင်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/16/2006 11:37:00 AM4comments
ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀တည်းကနေ ခုချိန်ထိ ကြိုက်နှစ်သက်မိနေတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ ကျွန်မ့ဘ၀မှာ ခုချိန်ထိတော့ သူများတိုက်တွန်းလို့လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေ အလွန်နည်းပါးခဲ့ပြီး၊ ကိုယ့်ဆန္ဒ အရ လုပ်ချင်စိတ်ရှိလို့လုပ်ခဲ့တာတွေက အတော်များပါတယ်။ ကျွန်မ ဆန္ဒနဲ့ ကျွန်မ လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အလယ်မှာ ကြိုးစားနေပါလျှက်နဲ့အဆင်မပြေမှု့ တွေ ကြုံလာပြီး စိတ်တွေရှုပ်လာ၊ အားလျှော့လာပြီး ရှေ့ဆက် လုပ်ချင်စိတ် မရှိတာတွေ ဖြစ်လာတာမျိုး အကြိမ်ပေါင်းများ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ အဲ့ဒီလို စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီဆို ကျွန်မ၊ ဒီကဗျာလေးကို သတိတရနဲ့စိတ်ထဲကနေ အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ရွတ်ဆိုပြီး အားတင်း၊ အားယူ ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျွန်မ အတွက် အမှတ်တရပါပဲ။ ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်မ နောက်ထပ်လည်း အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ရွတ်ဆိုနေဦးမှာပါ။
ဖန်ဖန်လေ အားအင်နှိုးလို့ ရယ်
တစ်နေ့ မှာ ဆုံးရာရောက်ပါလိမ့်
အားလျှော့ကာ ဆုတ်ချင်စမ်းပါနဲ့ 
ငှက်တေးကို အာရုံဆင်လို့ 
Thanks to khwunn and THKZ.
Posted by Nay Nay Naing at 12/15/2006 10:04:00 AM5comments
ဒီနေ့ခေတ်ပြိုင်က သတင်းတစ်ခုဖတ်ပြီး ရယ်ချင် သွားတယ်။ Joke of the Month လို့ပြောရမလား။ ဒီသတင်း ဖတ်ပြီးမှ နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဆန်း ဘာလို့မပါတာလဲဆိုတာ သဘောပေါက်တော့တယ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက မှန်တာတွေပြောလို့ ၊ လိမ်တာကို သဘာဝကျကျ မလိမ်တတ်လို့ဆိုပြီး ပြောရေးဆိုရေး အပိတ်ခံရတယ် ဆိုတာမျိုး ကျွန်မတို့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာ ရှိမယ်ထင်တယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ပြောရေးဆိုရေးပိတ်ပင်ခံရခြင်း - ခေတ်ပြိုင်
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဆိုတာ ကျွန်မနားလည်တာတော့ ပြန်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အကြီးဆုံး၊ တာဝန် အရှိဆုံးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် အပိတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ကို ရယ်ရပါတယ်။ သူ့ အစား ဘယ်သူက ပြန်ကြားပေးရမလဲ မသိဘူး။ စဉ်းစားလေ ရယ်ဖို့ ကောင်းလေပဲ။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ကမောင်ကမ ရှိပုံများ.. ရှက်များရှက်တက်လို့့ကတော့ … …
ဒါပေမယ့် သူတို့ က ဒါကို ရှက်ရကောင်းမှန်းလဲ သိမယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး။
ဥပမာ ပေးရရင်.. လူတချို့ က ရန်ဖြစ်ရင်၊ လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး လုံချည်လှန်၊ အော်ဆဲနဲ့ရန်ဖြစ်တက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သူဒီလို လုပ်လိုက်လို့တဖက်လူက ဘာမှ ပြန်မပြောရဲ၊ သူတို့ နဲ့ ပြန်ရန်မဖြစ်ရဲဖူးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်။ လူတချို့ ကတော့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ သေလောက်အောင် ရှက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စလို့မြင်တတ်ကြတယ်။ ဒီသဘောပါပဲ။
မင်းကိုနိုင်တို့ကိစ္စ တုန်းကလည်း ဆွေးနွေးဖို့ခဏခေါ်တာဘာဆိုပြီး၊ နောက်ကျတော့ ထိန်းသိမ်းထားတယ် ဖြစ်သွားပြန်ရော…။ ဒါ cabinet-level officer ပြောတဲ့ စကားပါ။ ဒီ အစိုးရ စကား ဘယ်လောက်များ ယုံကြည်စိတ်ချ ရပါသလဲ။
ကျွန်မ ဖတ်ခဲ့ မှတ်ခဲ့ မိတာလေး တစ်ခုပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက British နဲ့မဟာမိတ်ပြန်ယူပြီး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲဖို့British စစ်တပ်က အရာရှိနဲ့လျှို့ ဝှက်ဆွေးနွေးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က British တွေရဲ့ နယ်မြေမှာ သွားတွေ့ ခဲ့တာပါ။ အဲ့လို တွေ့ ဆုံကြတော့ British အရာရှိက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မင်းကို ငါတို့လှည့်ဖျားခေါ်ပြီး ဖမ်းလိုက်မှာ မကြောက်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်တဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ခင်ဗျားက British Officer တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်၊ စိတ်မပူပါဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့် အဲ့ဒီတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ရန်သူကိုတောင် ယုံကြည့်ထိုက်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တွေ့ ခဲ့တာ နာမည်ကြီး British Officer တစ်ယောက်ပါပဲ။ ကျွန်မ နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
ဒီဘက် မင်းကိုနိုင်တို့ ခေတ်မှာတော့ အမျိုးသားပြန်လည် စည်းလုံးရေးအတွက် Burmese Officer နဲ့တွေ့ မှသာ ခံလိုက်ရတော့တာပါပဲ။ ကျွန်မတို့လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ ယုံကြည်စရာ မကောင်းလိုက်ပုံတွေက ပြော မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။
Labels: Myanmar, News, Thoughts
Posted by Nay Nay Naing at 12/13/2006 11:26:00 PM5comments
ဒီနေ့ကျွန်မအတွက် အလုပ် schedule ထွက်လာပါတယ်။ 11 December 2006 က ကျွန်မလုပ်လို့ပြီးသွားတဲ့ အလုပ်တွေ အတွက် Item တစ်ခုကို Development Time ဆိုပြီး 1 day ရပါတယ်။ Analyst လုပ်ဖို့ ဆိုပြီး ၂ ရက် ထပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မရဲ့ Time Schedule က 29 December 2006 အထိ ပြည့်သွား ပါတယ်။ ဒါ Development သတ်သတ် အတွက်ပါပဲ။ SIT and UAT testing က January 2007 မှ လုပ်မှာပါတဲ့။ ရက်သတ်သတ် ထပ်ရပါသေးတယ်။ အင်း………….. ဒီ ၁ လလုံး ဘာမှ လုပ်စရာမရှိတော့ဘူး။
ဒီနေ့ ပဲ PM က User က Changing Request တစ်ခု လုပ်တာကို ကျွန်မကို Assign လုပ်မယ်ဆို ရနိုင်မလားတဲ့ လာမေးတယ်။ ရပါတယ် လုပ်ပေးမယ် ပြောလိုက်တာ.. ဒါဆို အဲ့ဒီ ဟာကို ဘယ်လောက်ကြာမလဲတဲ့။ Analyst လုပ်ဦးမယ်၊ 1 day ပေးပါ၊ ဒါပေမယ့် development က2to3days ပေါ့လို့ပြောလိုက်တော့၊ development အတွက် 1 week ယူတဲ့။ ဟုတ်ပြီ.. အီးမေးပို့ ပေးလိုက်လို့ပြောလိုက်တော့ ကျွန်မက 29 December အထိ အားမှာ မဟုတ်တော့ ဒီ Item ကို 1st and 2nd week of Jan မှာ လုပ်ဖို့Assign လုပ်လိုက်မယ်တဲ့ရှင်။ ဖြစ်နိုင်မလား ထပ်မေးသေးတယ်။ ဟိုရှေ့ ကဟာက Testing ဆိုတော့ ဒီဟာ development နဲ့တစ်ချိန်ထဲ နှစ်ခုလုပ်ရမှာ အဆင်ပြေပါ့မလားတဲ့လေ။ စိတ်လေတယ်။ သူလုပ်ခိုင်းတာက ၁ ရက်နဲ့ တောင် ပြီးနိုင်နေတယ်။ ကိုယ်က ပိုပိုလိုလို2or3days Development လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
ဒီအလုပ်မှာ ဒီပုံအတိုင်းသာသွားရင် ကြာရင် ကျွန်မ ပျင်းပြီး ရူးလောက်တယ်။ အော်..အရင် အလုပ်တွေမှာ အ မလုပ်ရှုပ်တုန်းကတော့ အလုပ်မရှုပ်တဲ့ အလုပ်လေးရရင် ကောင်းမှာလို့ဆုတောင်းတယ်၊ ခုအလုပ်မှာ အလုပ်မရှုပ်၊ အားနေပြန်တော့ လုပ်စရာလေးတွေ ပေါ်လာပြီး အလုပ်ရယ် ရှုပ်စမ်းပါလို့ဆုတောင်းနေရတယ်။ လူတွေများ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဒါကြောင့် လူ့ အလို နတ်မလိုက်နိုင်လို့ပြောနေကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/12/2006 03:37:00 PM0comments
One should love you, the way you are
Not the way she wants you to be ...
If someone tries to change you then it is not love butacompromise
And love needs no compromise ...
( Thanks To sylatt From NativeMyanmar)
Posted by Nay Nay Naing at 12/12/2006 11:25:00 AM2comments
Busy Day At Work - 11 December 2006
ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြား တစ်နေကုန်အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ မနက် ၉ နာရီက ညနေ ၆ နာရီအထိ အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ဆိုတာ တစ်ခြားအလုပ်တွေ တုန်းက စကားထဲ ထည့်ပြောနေစရာမလိုပေမယ့် ဒီအလုပ်မှာ တော့ ၁လခွဲ အတွင်းမှာ ပထမဆုံး အလုပ်ရှုပ်တဲ့ နေ့ ပါပဲ။
ကျွန်မ နဲ့နောက် တစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူပြီး ရှင်းလိုက်ပါဆိုပြီး Items 13 ပါတဲ့ Task List တစ်ခု ကို ပြီးခဲ့ တဲ့ အပတ်က PM က email ပို့ ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မက ခုမှ စ၀င်တာ မကြာသေးဘူဆိုတော့ ခက်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့လွယ်လွယ်လေးတွေပဲ လုပ်ပါတဲ့။ Task List ကို ကြည့်လိုက်တာ လွယ်လွယ်လေးတွေ။ ပြီးတော့ Rollout date က February 2007 တဲ့။ ဒါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ က Business Analyst ၊ တစ်ခြားတစ်ယောက် နဲ့ကျွန်မ ရယ် meeting လုပ်ပြီး သိပ်မရှင်းတာလေးတွေ မေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ကယ်တော့ Requirement Email မှာထဲက 99% လောက် အသေးစိတ်ရှင်းပြီးသားပါ။ ကျွန်မကို 8 out of 13 Items assign လုပ်မယ်တဲ့။ Ok ရဲ့လားတဲ့။ ခက်တာ5ခုကို တစ်ခြားတစ်ယောက်လုပ်ခိုင်းမယ်တဲ့။ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ :D
ဒီနေ့အဲ့ဒီ Item 8 ခုကို လုပ်လိုက်တာ အကုန်ပြီးသွားပါပြီ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခါ application server ကို restart လုပ်ပြီး test လုပ်ရတာဆိုတော့ နည်းနည်း အချိန်ကုန်တယ်။ SIT and UAT မှာ Testing schedule က ဘယ်တော့လဲ မေးတော့ Development & Testing Schedules မပြီးသေးလို့နောက်နေ့ မှ ပြောမယ် ပြောတာပဲ။ ဘယ်တော့ Testing လုပ်လုပ် ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာက ကိုယ့်အလုပ်ပြီးဖို့ ပါပဲ။
ကျွန်မအနေနဲ့ တော့ အလုပ်ဆိုတာ အလုပ်နဲ့ တူမှ ကောင်းတယ် ထင်တယ်။ အချိန်ပိုတွေ အရမ်းလုပ်နေရတာကို မကြိုက်ပေမယ့်၊ အလုပ်မှာ ပုံမှန် အလုပ်ချိန်9AM to6PM အတွင်းမှာတော့ လုပ်စရာလေးတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေမှ။ မဟုတ်ရင် ပျင်းတာနဲ့သေလောက်တယ်။ အလုပ်မရှိရင်၊ တခြား ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ပေါ့ဆိုတော့လဲ အလုပ်မှာဆို အလုပ်နဲ့ဆိုင်တာတွေပဲ လုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်။ တခါတလေ အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ ကြားကမှ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေကို မရမက အချိန် ယူ လုပ်ရတာကလည်း ပျော်စရာ တစ်မျိုးပဲလေ။
Posted by Nay Nay Naing at 12/11/2006 08:58:00 PM0comments
Present From Best Friend
မနေ့ က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပေးတဲ့ လက်ဆောင်..
ဒီလို စာလုံးလေးတွေနဲ့နာမည်ဖေါ်တာကို ဟို တစ်ခါ အရုပ်ဆိုင်ရောက်ထဲက လိုချင်နေတာပါ။ ဘာလို့ မှန် မသိဘူး အဲ့လို စာလုံးလေးတွေ အရုပ်လေးတွေကို သဘောအရမ်းကျမိတယ်။ ကိုယ့်ဟာကို ၀ယ်ဖို့ ဆိုတာ နည်းနည်းများ ကြောင်တောင်တောင် နိုင်မလားဆိုပြီး.. မ၀ယ်ပဲနေလိုက်တာ.. ကိုယ်ဘာကြိုက်တတ်လဲ သူပဲသိနေတာလား၊ သူကြိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တာ ဒီနေရာမှာ တူသွားတာလားတော့မသိဘူး။ ခုတော့ ၀ယ်စရာမလိုပဲ လိုချင်တာရလိုက်တယ်။
ကျွန်မကတော့ သူ့ မွေးနေ့ ဆို သတိရတောင် မွေးနေ့ လက်ဆောင်ပေးဖို့မေ့နေတတ်တယ်..
အမေ့ကောင်း လို့ ပဲ ပြောရမလား။ မှတ်မှတ်ယယ မနှစ်ကတော့ သုံးနှစ်စာပေါင်းပြီး လက်ဆောင်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်. :D ဒါတောင် မေ့တော့မလို့ ။
ကျွန်မ ပထမဆုံးပေးရခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် က ၂၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မှာ….. ၂၁ နှစ်ကနေ ခုထိဆို နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။ နှစ်စဉ် မွေးနေ့ရောက်တိုင်း မမေ့မလျှော့၊ သတိတရ ရှိခဲ့တာတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ခုလိုပဲ မှတ်မိ၊ သတိရ၊ ဆုတောင်း၊ လက်ဆောင်တွေ ပေးနိုင်နေပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 12/10/2006 07:36:00 PM5comments
Dinner and Shopping at Friday Evening
ဒီနေ့သောကြာနေဆိုတော့ City Hall မှာ မြန်မာအစားအစာတွေကို ညစာအနေနဲ့သွားစားမလို့ ဟာ ချစ်သူငယ်ချင်းကြီးရဲ့ ကောင်းမှု့ နဲ့Orchard မှာ စားဖြစ်သွားတယ်။ နှစ်ခေါက်ရှိမှ မှတ်မိမယ်ထင်လို့ နဲ့ တူတယ် ဒီနှစ်တော့ နှစ်ခါတောင်စားလိုက်ရတယ်။ နောက် နှစ်တွေရောက်ရင်လဲ ဒီရက်တွေရောက်တိုင်း သတိရနေမှာပါ။
နိုဝင်ဘာရောက်တိုင်း ရာထူးတွေတိုး ၊ လခ တွေတိုးပြီး ငါ့ကို မွေးနေ့ လက်ဆောင် ကောင်းကောင်းပေးနိုင်၊ ဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်း Bonus တွေရပြီး မုန့် တွေများများ လိုက်ကျွေးနိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
ဒီနေ့ စားတာတွေက ပိုများပေမယ့် ဘာဓာတ်ပုံမှ မရိုက်ထားမိတော့ အရင် 3rd December က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပဲ တင်လိုက်တော့မယ်
ထုံးစံအတိုင်း စာပြီးဗိုက်ဝတော့ Shopping သွားကြည့် ဖြစ်ကြတယ်။ ဒီနေ့Takashimaya မှာ သူရဲ့ Credit Card နဲ့ ဝယ်ရင် 10% discount ပေးတာတွေ့ တယ်။ ကျွန်မမှာက Takashimaya က Credit Card မရှိတော့ ၀ယ်တဲ့ ပစ္စည်းအတွက် discount မရခဲ့ဘူး။ Credit Card တစ်ကတ်ရှိရင် လုံလောက်တယ်ဆိုပြီး နောက်ထပ်ဘာမှ မလျှောက်ပဲနေတာ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီလို discount တွေရအောင် နောက်ဆို Credit Card တွေ များများလျှောက်ထားမှ ကောင်းမယ်နဲ့ တူတယ်။
ဘာတွေဝယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းကို မွေးနေ့ လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးဖြစ်တယ်။ မပေးရင် ဘလောခ့်မှာ ရေးမယ်ဆိုပြီး ချိန်းခြောက်နေသေးတယ်။ ဒါမျိုးချိန်းခြောက်ရင် ကျွန်မက ကြောက်မယ်ထင်နေ သလား မသိပါဘူး။ :P ကျွန်မက သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ သံယောစဉ်ကို ဘာနဲ့ မှ တန်ဖိုးမဖြတ်ချင်လို့ဘာမှ ၀ယ်မပေးပဲနေတာကို အတင်းကြီး တန်ဖိုးဖြတ်ခိုင်းနေတော့ စိတ်မကောင်းစွားနဲ့တန်ဖိုးဖြတ် လိုက်ရတော့တယ်။ ဘာဝယ်ပေးခဲ့လဲ? ... ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းကြီး အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ အရာကိုပဲ ၀ယ်ပေးခဲ့တာပါ။
Gap က အင်္ကျီလေးတစ်ထည် ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ ကြည့်ရုံကြည့်တာပါ၊ ဈေးက S$ 579 ဆိုလို့ မ ၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အင်း.. ချစ်သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက မွေးနေ့ လက်ဆောင်ပေးပြီး ကုန်လို့ ပေါ့။ မဟုတ်ရင် ပေးဖို့ကျန်နေတဲ့သူကို မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ၀ယ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း မိုက်တယ်၊ လိုက်လောက်တယ်ဆိုပြီး ချောက်တွန်းစကားသာ ဆိုနေတာ၊ ဘာမှ မသိတတ်ဘူး။ တကယ်ဆို ၀ယ်ပေးလိုက်ပြီးတာပဲဟာကို ၀ယ်တော့ ၀ယ်မပေးဘူး။ ဒီနှစ်တော့ ထားလိုက်ပါတော့ ... နောက် နှစ်မှပဲ.. နိုဝင်ဘာဆို Shopping လေးကြိုသွားထား... လိုချင်တာလေးတွေ စာရင်းလုပ်ပြီး တောင်းတော့မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/09/2006 12:11:00 AM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂလာနေ့ က Desktop ကွန်ပြူတာတစ်လုံးလာပေးလို့လိုအပ်တဲ့ Install လုပ်နေရတာနဲ့ဒီရက်ပိုင်း မအားဘူး ဖြစ်နေတာပါ။ သူတို့အသစ်လာပေးတဲ့ စက်ထဲမှာက Window ၊ Office ၊ WinZip နဲ့LoutsNote ပဲ သွင်းပေးထားတာဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တာ အကုန်သွင်းပြီး configuration တွေလုပ်နေရတာ အလုပ်ရှုပ်၊ စိတ်ရှုပ် ဖြစ်နေတာပဲါ။ အရင်ပေးထားတဲ့ Laptop တုန်းက အကုန် Install လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ ကျွန်မလိုတဲ့ ZawGyi Font လောက်ပဲ Install လုပ်ခဲ့ရတာ။ Development လုပ်တာတွေက Laptop မှာ အဆင်မပြေတာနဲ့Project Manager က နောက် Desktop တစ်လုံး ထပ်တောင်းပေးတာပါ။ မနေ့ ကတော့ Desktop မှာ လိုတာတွေ အကုန်နီ်းပါး Install လုပ်ပြီးသွားတယ်။ ဒီနေ့တော့ အလုပ်မှာ တခြား လုပ်စရလေးတွေ လုပ်လို့ ရမလား အောင်မေ့ခဲ့ပါတယ် ဒီမနက် အလုပ်လည်းရောက်ရော Supervisor ကပြောတယ်၊ ဒီနေ့မနက်ပိုင်း 0ffice ပြန်ရွှေ့ ရမယ့်တဲ့ရှင်။
ကျွန်မ ဒီအလုပ်ကို စ၀င်တုန်းက နေရတာ ၁၂ ထပ်မှာ။ ရောက်ပြီး ၂ ပတ်လောက်လဲနေရော ၉ ထပ်ကို ခဏ ပြောင်းရမယ်တဲ့။ ဘာလိုလဲ ပြောင်းရမလဲဆိုတာကို Senior တစ်ယောက်က ပြောပြတယ်။ ဒီနေရာမှ ပြန်ပြီး ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ ပါတဲ့။ ကျွန်မ စိတ်ထဲ နည်းနည်း အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ကြည့်ရတာ နေရထိုင်ခင်း အကုန် အဆင်ပြေနေရဲ့နဲ့ဘာလို လုပ်မှာလဲပေါ့။ ခဏနေတော့ Project Manager က တိုးတိုးလေး လာပြောတယ်။ သူတို့ Hotdesking System လုပ်မလို့ ဒီလို ပြင်ဆင်မှု့ တွေ လုပ်ရမှာပါ။ တွေ့ တဲ့ အတိုင်းပဲ ခု တစ်ယောက်ချင်းစီ ရထားတဲ့ နေရာတွေက အကျယ်ကြီးတွေ၊ နောက် အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့ လူ တစ်ယောက်ချင်းစီကို နေရာ သတ်သတ် မှတ်မှတ် မပေးတော့ဘူးတဲ့။ လူတိုင်းကို Desktop Computer တွေအစား Laptop တွေပေးမယ်၊ ရိုးရိုးဖုန်းတွေအစား IP Phone တွေတပ်ပေးမယ်၊ ပြီးတော့ နေရာတွေက ကျဉ်းသွားမှာမို့ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဖို့Swimming Pool Locker ပေးမယ်တဲ့။ ဘေးမှာ နားထောင်နေတဲ့ တစ်ယောက်က Swimming Pool Locker ဆိုတာ မသိဘူး၊ ဘာလဲလို့မေးတော့ အဲ့ဒီ ပြောတဲ့ သူက Swimming Pool တွေမှာ တွေ့ ရတဲ့ Locker မျိုးမို့သူကတော့ အဲ့လို ခေါ်တယ်၊ ဘယ်လိုဟာလဲ သိချင်ရင် ခေါင်းမိုးပေါ်က Swimming Pool နားမှာ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုသာ တက်ကြည့်တဲ့လေ။ နောက်ဆုံး သူအဓိက က ပြောချင်တာက ဒီလို ပြောင်းတာဟာ နေရာ အများကြီးမယူပဲ လူများများဆန့် အောင်လို ပြောင်းရတာလို့ ပဲ ကျွန်မနားလည်ခဲ့တယ်။ သူတို့အဲ့လို ပြောင်းရတာကို သိပ်ကြိုက်ကြပုံ မပေါ်ဘူး။ အင်း ... ကိုယ်နဂို ရထားတဲ့ နေရထက်စာရင် အများကြီးကျဉ်းသွားမယ့် နေရာကို ပြောင်းရမှာကို ဘယ်လို လူမျိုးတွေမှ ကြိုက်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။
အင်း ဒီနေ့ တော့ အဲ့ဒီ Hotdesking System နဲ့စမိတ်ဆက်ရ တော့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့မနေ့ က User Training ဆိုပြီး IP ဖုန်းတွေ ဘယ်လို သုံးရသလဲဆိုတာကို နာရီ ၀က်လောက်သွား နားထောင်၊ စမ်းကြည့် လုပ်လိုက်ရတာ ဖြစ်မယ်။ IP ဖုန်းက ရိုးရိုးဖုန်းတွေလိုပါပဲ။ ထူးတာက ဖုန်းသုံးမယ်ဆို User Account နဲ့ကိုယ်ပိုင် Password သုံးပြီး Login ၀င်ရတယ်။ ဘယ်နေရာ ကိုယ်က ထိုင်ထိုင်၊ ဘယ်ဖုန်းကို မဆို ကိုယ် Login လုပ်ထားရင် ကိုယ်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ကိုယ့်ဖုန်းပေါ့။ သူတို့ ပြောတာတော့ အလုပ်ရောက်ရင် ထိုင်ချင်တဲ့နေရာထိုင်၊ Laptop လေး နဲ့Internet connect လုပ်၊ ဖုန်းလေးမှာ Login ၀င်၊ လိုအပ်ရင် တစ်ခြားသွားမယ်၊ Meeting သွားမယ် ဆိုရင်၊ ကိုယ့်ရဲ့ HP ကို Call Forward လုပ်ရတယ်၊ HandPhone No. ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့၊ ပြန်ရင် ဖုန်းကို Logout ပြန်လုပ်။ ဟင်း….. တော်တော် ရှုပ်တယ်။ ဖုန်းကို Login ၀င်ဖို့မေ့နေရင်၊ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကို ခေါ်လို့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အင်း…. တစ်နေ့ လောက်တော့ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး Phone ကို Login မလုပ်ပဲ ထားကြည့်ဦးမှနဲ့တူတယ်။
ဒီနေ့ပြောင်းရတဲ့ အတွေ့ အကြုံအရတော့ နေရတွေက တော်တော်ကျဉ်းသွားတယ်။ ၁၂ ထပ်က Main Room ထဲမှာ အားလုံး နေရာလေးတွေ လူ ၂၀၀ စာလောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ လိုက်တော့ သေချာမကြည့်မိဘူး။ လူတွေများတော့ ကိုယ်စောစောပြန်ရင် လူသိတယ်၊ ဒါ မကောင်းဘူး။ သူများတွေ ဘယ်နားထိုင်လဲ လိုက်ရှာမှ သိရပေမယ့် ကျွန်မက Desktop ကွန်ပြူတာပါရှိနေတော့ ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့သိပ်လုပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ခုတော့ ရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင် လူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ BA တစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်၊ ဘေးတစ်ဘက် မှာတော့ Project Lead က လာထိုင်တယ်။ နောက်တစ်ဘက်မှာ Senior တစ်ယောက် လာထိုင်တယ်၊ ဆိုးတာက နောက်ဘက် မျက်စောင်းထိုးမှာ Project Manager က လာထိုင်နေတယ်။ Lead နဲ့PM က ကျွန်မရဲ့ Desktop ရဲ့ ကွန်ပြူတာ Screen ကို မြင်နိုင်နေတယ်။ Laptop သုံးနေရင်တော့ မြင်ရမယ် မထင်ဘူး။ နောက်ဆို ဘလောခ့်တွေ ဖတ်ရင် Laptop သုံးပြီး ဖတ်မှ နဲ့ တူတယ်။
နောက်ဆိုးတာ တစ်ခုက ဒီနေရာမှာ ဘာ ရှု့ ခင်းမှ မမြင်ရဘူး။ ဒါဆို မျက်စိညောင်းရင် ဟိုငေး ဒီငေး လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ အရင်နေရာ ၁၂ ထပ်က နေရာတုန်းက တိုက်ကြီတွေ မြင်ရတယ်။ ၉ ထပ်မှာ ၁ လလောက် နေရတဲ့ နေရာတတွေတုန်းက စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ရှုခင်း ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။ အရင် နေရာတွေတုန်းက ဖုန်းနဲ့ လက်ဆော့ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ပျင်းလို့ရိုက်ထားတာ၊ ခုတော့ အမှတ်တရပေါ့။ ဒီမှာ
၉ ထပ်မှာ ဘယ်ဘက်ကို လှမ်းကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း...
၉ ထပ်မှာ မှန်နားကပ် ငုံ့ ကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း
Temp-OfficeDesk at 9th Floor ဒါက အရင် ၁၂ ထပ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း.. ( ခုတော့ ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး)
Posted by Nay Nay Naing at 12/07/2006 04:45:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/06/2006 08:58:00 PM 1 comments
Chapter 1: Algorithms with numbers
Chapter 2: Divide-and-conquer algorithms
Chapter 3: Decompositions of graphs
Chapter 4: Paths in graphs
Chapter 5: Greedy algorithms
Chapter 6: Dynamic programming
Chapter 7: Linear programming
Chapter 8: NP-complete problems
Chapter 9: Coping with NP-completeness
Chapter 10: Quantum algorithms
Download : Algorithms
Posted by Nay Nay Naing at 12/06/2006 10:03:00 AM0comments
3rd December- Birthday Star!
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ သူငယ်ချင်းကြီး...
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး၊ လိုအင်ဆန္ဒ အာလုံး အမြန်ဆုံးပြည့်ဝပါစေ..
Posted by Nay Nay Naing at 12/03/2006 08:08:00 AM 1 comments
I don't know.. I don't know..
ဒီနေ့နားထောင်၊ ကြိုက်နှစ်သက်မိတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်.. ဒီသီချင်းထဲက အကြိုက်ဆုံး စားသားက
" တွေးရင်းရူး...ငါတော့ တွေးရင်းရူးနေလို့ ...
I don't know .. I don't know .. ငါမသိဘူး .... "
ရဲလေး - ငါမသိဘူး
ဒီမှာ သီချင်းထဲက စာသား အကုန်လုံးကို ရေးဖို့ တော့ စိတ်မရှည်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်.. စိတ်ရှည်သလောက်လေးတော့ ရေးထားတာ တချို့ က.. ဒီမှာ...
နေမိခဲ့တော့လည်း တွေ့ ခွင့်ရဖို့ မလွယ်
အမှန်တရား ရှိနိုင်မယ် ငါဘယ်သူ မှ မချစ်ခဲ့ဘူး...
တန်ဖိုးအနမ်းတွေကို ငါ့ဘက်ကလွမ်းနေလို့ 
တချိန်ချိန်မှာ စာနာပေးဦးမလား မျှော်လင့်..
အမှတ်တရ နဲ့သိမ်းထားခဲတဲ့ ပန်းစည်းများစွာ နွမ်းခြောက်ပြီး
ဒီလိုခွဲပြီးတော့.. ငါလိုချင်တာ မင်းမသိတော့..
ခိုး.. ခိုးပြီး.. ကိုယ့်မှာလေ မင်းကို..
cho: I dont know.. ငါမသိဘူး အချစ်ရေ...
မင်းရဲ့ အနား ငါလုံးဝ မရှိခဲ့
တွေးရင်းရူး...ငါတော့ တွေးရင်းရူး နေလို့ ...
I don't know.. ငါမသိခဲ့ပါဘူး...
မင်းလေးနား ဘေးသို့ ....
တွေးရင်းရူး .. ငါတော့ တွေးရင်းရူး.. အချစ်လေး..
ပထမဆုံးတွေ့ ခွင့်ရတဲ့ မင်းရဲ့ အပြုံးလေးပဲ
မမေ့ရက်ခဲ့နိုင်ပါ .. ဒီအချိန်ထိ မေ့လို့ မရ...
သူငယ်ချင်းများအလယ်မှာ.. ငါ အဖေါ်မဲ့ ခဲ့ပြီလား..
လှောင်ရည်သံတွေကြား ငါလေ ရူး.. မင်းကြောင့်...
မင်းပဲ.. မင်းပဲ.. သိမ်းပိုက်ပါ အကုန်လုံး
မင်းပဲ.. မင်းပဲ.. ငါဘ၀မှာ အချစ်ဆုံး
ရက်စက်ခဲ့ရင် လည်း မမုန်းဘူး..
မင်း ... သူ့ ကိုမချစ်နဲ့ တော့..
I don't know.. ငါမသိဘူး အချစ်ရေ...
ဒီလို အသက်မဲ့တဲ့ နေ့ မှာ မင်းရှိမှ ပြည့်စုံမှာ
ဒီလိုပဲ ညနက်တိုင်းမှာ အိမ်မက်ထဲရောက်လာပါ
နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း လည်း ပြောင်းပြီကွာ...
မင်း.. မင်းကို ချစ်မှာပဲ..
I don't know.. ငါမသိဘူး အချစ်ရေ..
I don't know.. I don't know.. ငါမသိဘူး
ဆန့် ကျင်ဘက်တွေနဲ့အချစ်ရေ. အချစ်ရေ..
ဟိုးး... မင်းနဲ့ ငါ ဘယ်ချိန်နီးမလဲ မသိတော့
ဒီသီချင်းကို NativeMyanmar မှာ တင်ပေးခဲ့တဲ့ ToMMyGiRL ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Posted by Nay Nay Naing at 12/02/2006 09:55:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/01/2006 04:25:00 PM0comments
World AIDS Day - 2006
FRIDAY, DECEMBER 1st IS WORLD AIDS DAY
သီတင်းတွေလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့Google က တဆင့် ဒီနေ့ ဟာ WORLD AIDS DAY ဖြစ်တယ်သိလိုက်ရတယ်။
လူသားအားလုံးကို ချောက်လန့် နေတဲ့ ဒီရောဂါဆိုးကြီး၊
ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းပဲ ရှိပြီး၊ ကုသရန်နည်းလမ်း ရှာဖွေမတွေ့ သေးတဲ့ ဒီရောဂါဆိုးကြီး၊
လူငယ် နဲ့လူလတ်ပိုင်း အရွယ်ကောင်းတွေမှာ အဖြစ်များနေတဲ့ ဒီရောဂါဆိုးကြီး။
ခုချိန်မှာ ဒီရောဂါကြီးက ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချောက်လှန့် နေပါပြီ…
ကျွန်မ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ကြားရ၊ မြင်ရတာတွေအရလည်း ရန်ကုန်က ရပ်ကွက်တွေမှာ AIDS ကူစက်ခံထားရသူတွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ်.. တိကျတဲ့ စာရင်း ကောက်ခံမှု့ ၊ သတင်း ထုတ်ပြန်မှု့မရှိလေတော့ ဘယ်လောက်တောင် ပြန့် ပွါး နေပြီလည်း အတိအကျ မသိရပေမယ့်၊ သတင်းတွေ အရတော့ လူ ၁၀၀ မှ ၂ ယောက်ဟာ AIDS ကူးဆက်ခံနေရပါတယ်တဲ့….
ကျန်းမာရေး အသိပညာ ဖွင့်ဖြိုးမှု့ မရှိလို့ 
ကျန်းမားရေး စောင့်ရှောက်မှု့ မရှိလို့ 
ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ ရတဲ့ သူတွေ….
ရောဂါရှင် မိဘများထံမှ တဆင့်ကူးစက်ပြီး
ဒီရောဂါ နဲ့အတူ မွေးဖွါးလာရတဲ့ ကလေးငယ်များ…..
ရောဂါရှင်မိဘများ သေဆုံးသွားလို့ 
ကျန်ရစ်ခဲ့သော မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ....
လိုအပ်တဲ့ ကုသမှု့ မရရှိတဲ့
ရောဂါ ကူးစက်ခံနေရတဲ့ ဒီရောဂါရှင်တွေ…
ဒီရောဂါဆိုးကြီး မပြန့် ပွါးအောင်
ဒီရောဂါကြောင့် မိဘမဲ့ ဖြစ်နေရတဲ့ ကလေးတွေကို
Posted by Nay Nay Naing at 12/01/2006 12:23:00 PM0comments
US က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူ ဒီ Service သုံးပြီး ရန်ကုန်ကို ဖုန်းခေါ်တာ အဆင်ပြေတယ် ပြောထဲ က ဒီ JaJah အကြောင်း ရေးမယ် စဉ်းစားနေတယ်။ ဟိုတစ်ခါ မမွန်ကိုတွေ့ တုန်းကလည်း ဒီ Site နဲ့သူတို့ ပေးတဲ့ Service အကြောင်း ရေးမယ် ပြောခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဟာကို ရှုပ်နေတာနဲ့ဒီ Website ကို သေချာ မစမ်းဖြစ်သေးလို့မရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ လုပ်မယ်ပြောပြီး မလုပ်ဖြစ်တာ အတွက် စိတ်ထဲမှာ အားနာမိတယ်။
ဒီ JaJah က အရင်တစ်ခါရေးခဲ့တဲ့ FuturePhone လိုပဲ အင်တာနက်ကနေ ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ ခေါ်လို့ ရတဲ့ Service ပေးပါတယ်။ ဟို FuturePhone က US က လူတွေပဲ သုံးလို့ ရတာဖြစ်ပေမယ့် ဒီ JaJah ကတော့ နိုင်ငံတော်တော်များများက သုံးလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အတွက် အသုံးဝင်တာပေါ့။ ကိုယ့်ဟာကို အရင် တစ်ပတ်က register လုပ်လိုက်တယ်။ ဒီ JaJah က ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ Phone No က သူ က Free ပါလို့ပြောထားတဲ့ နိုင်ငံက ဖြစ်နေဦးတော့ Phone တိုင်းကို Free ပြောလို့ မရပါဘူး။ သူ့ Service မှာ Register လုပ်ထားတဲ့ Phone No တွေကိုခေါ်မှ သာ Free ပြောလို့ ရတာပါ။ ဒီတော့ Register User အချင်းချင်း စမ်းကြည့်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေကို register လုပ်ပါပြောတာ ဘယ်သူမှ မလုပ်ကြဘူး ။ ကျွန်မက သူတို့ကိုယ်စား register လုပ်ပေးလို့ ကလည်း မရဘူးလေ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ဒီ site က IP address ကို ဖတ်ပြီး Country Code ကို auto ထည့်ပေးတာဆိုတော့ ကျွန်မ register လုပ်ရင် ကျွန်မနေတဲ့ Country ကလွဲလို့တခြား နိုင်ငံကို ရွေးလို့ မရဖြစ်နေတာကို... တစ်ခုတော့ ရှိတယ်၊ JaJah က သူတို့Service ကို Register လူတိုင်း စမ်းကြည့်လို့ရအောင် သူတို့ စီမှာ Account ဖွင့်လိုက်တာနဲ့Account Balance မှာ ၀.၆၅ $ တည့်ပေးတယ်။ ကျွန်မလဲ အဲ့ဒီ ပိုက်ဆံနဲ့တစ်ချို့ ဖုန်းတွေကို စမ်းခေါ်ကြည့်တာတော့ အသံကြားရတာ ကြည်ကြည်လင်လင်ပါပဲ။
နောက်မှ ထပ်စမ်းပြီး ရေးမယ် စိတ်ကူးတာ ခုတော့ ရေးစရာ မလိုတော့ဘူး.. ကံကောင်းပုံများ.. မနေ့ က ကို TZA က သူ့ ရဲ့ ဘလောခ့်မှာ ဒီအကြောင်းလေး ရေးတင်လိုက်တာတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို TZA ရှင့်...
Hello JaJah Lah? by ThantZinAung
ခုဆို ဒီ Servie အကြောင်း အသေးစိတ်သိလိုသူတွေ ကို TZA ဘလောခ့်မှာ သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ မမွန်လည်း အဲ့ဒီမှာပဲ သွားကြည့်လိုက်ပါနော်..
Labels: FreeCall, WebSite
Posted by Nay Nay Naing at 12/01/2006 09:57:00 AM6comments